မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံးတို့ NCA တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုး | Myanmar Digital News
မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံးတို့ NCA တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုး
နေပြည်တော် ၁၃ ဖေဖော်ဝါရီ
တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် (NCA) တွင် မွန်ပြည်သစ် ပါတီ (NMSP) နှင့် လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး(LDU) တို့ ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန - ၂ (MICC - II) ၌ ကျင်းပသည်။
အခမ်းအနားသို့ မော်လမြိုင်မြို့ အောက်ပဲခူး ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဆရာတော်အဂ္ဂမဟာ ပဏ္ဍိတ ၊ ဘဒ္ဒန္တသီလာစာရ အမှူးပြုသော ဆရာတော်၊ သံဃာတော်များ ကြွရောက်တော်မူကြပြီး နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေနှင့် ဦးဟင်နရီ ဗန်ထီးယူ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း၊ ပြည်ထောင်စုတရား သူကြီးချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင် လှိုင်၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးညွှန့်၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌဦးလှသိန်း၊ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ် ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်း၊ အမျိုးသားပြန် လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ပြည်ထောင် စုစာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ၊ မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ တော်ဗဟိုဘဏ် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်နှင့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေး နွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ (UPDJC)၊ နိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပစ်ခတ်တိုက်ခိ်ုက်မှုရပ်စဲရေးပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး(JMC – U) ကော်မတီဝင်များ၊ နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာ နချုပ် တိုင်းမှူး၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းရင်းသား ရေးရာဝန်ကြီးများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ထောမွန်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ လားဟူဒီမို ကရက်တစ် အစည်း အရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ကြာခွန်ဆာနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ နိုင်ငံတကာအသိသက်သေအဖြစ် လက်မှတ် ရေးထိုးမည့်သူများ၊ ပြည်တွင်းအသိသက်သေအဖြစ် လက်မှတ်ရေးထိုးမည့်သူများ၊ နိုင်ငံခြားသံတမန် များ၊ အထူးဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက် ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာနဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံ တော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က မိန့်ခွန်းပြောကြား သည်။ ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က မိန့်ခွန်း ပြောကြားသည်။ဆက်လက်၍ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP) နှင့် လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်း အရုံး(LDU) ကိုယ်စားမွန်ပြည်သစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ထောမွန်က မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို ပြသသည်။ထို့နောက် တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိ်ုက်မှု ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် အနှစ်ချုပ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းနှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်အောင်မင်းတို့က ဖတ်ကြားကြသည်။
ဆက်လက်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအစီအစဉ်ကို ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်၊ နိုင်ငံ တော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်း ခိုင်သန်း၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ဒုတိယတပ်မတော်ကာ ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း၊ အမျိုးသားပြန် လည်သငြ့်မတ်ရေး နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ထောမွန်၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနိုင်အောင်မင်း၊ စစ်ဦးစီးချုပ် နိုင်လယီကောင်း၊ လားဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌကြာခွန်ဆာ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ကြာဆော် လမွန်၊ ဗဟိုကော်မတီဝင် နာဗစ်ဘွန် တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။
ယင်းနောက် ပြည်တွင်းအသိသက်သေများအဖြစ် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုပူး တွဲကော်မတီ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ တပ်မတော်အစုအဖွဲ့မှ ပြည်ထောင် စုဝန်ကြီးနိုင်သက်လွင်၊ ဦးခင်ဇော်ဦး၊ ဦးခွန်မောင်သောင်း၊ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ နိုင်ငံရေး ပါတီများအစုအဖွဲ့မှ ဦးသုဝေ၊ ဒေါက်တာ တူးဂျာ၊ ဦးသိန်းထွန်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်မှ ဦးသိန်းဇော်၊ ဦးအောင်စိုး၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီမှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနောင်၊ ဦးပြည့်စုံ၊ ဦးမောင် မောင်ငြိမ်း၊ သူရဦးဘိုနီ၊ Rev. စောမက်သယူးအေး၊ စိုင်းမျိုးသန့်၊ ဦးကိုကိုကြီး၊ မွန်ပြည် နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် ဒေါက်တာ မင်းစိုးလင်း၊ မွန်တိ်ုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးမင်းတင်ဝင်း၊ လားဟူတိုင်းရင်း သားရေးရာဝန်ကြီး ဦးယောသပ်၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဒေါ်မွှေးမွှေးခင်တို့က လက်မှတ် ရေးထိုးကြသည်။
ထို့နောက် ပြည်ပသက်သေများအဖြစ် ကုလသမဂ္ဂဒုတိယအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Dr. Shamshad Akhtar ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ အာရှရေးရာ အထူး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာစွန်းဂေါ်ရှန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဂျပန် အစိုးရ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Yohei SASAKAWA ၊ အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံမှ ဒုတိယ အမျိုးသား လုံခြုံရေး အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် H.E, Mr. Rajinder Khanna ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဒုတိယ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Virasakdi Futrakul ၊ ဥရောပသမဂ္ဂမှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kristian Schmidt တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။
ယင်းနောက် ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းနှင့် မွန်ပြည် သစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်အောင်မင်းတို့က တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး စာချုပ် ကို အပြန်အလှန်လဲလှယ်ကြပြီး အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
အခမ်းအနားအပြီးတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် ၊ ဒုတိယသမ္မတများ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန် ရှိသူများသည် ပြည်တွင်းပြည်ပအသိသက်သေများနှင့် လည်းကောင်း၊ သံတမန်များနှင့် လည်း ကောင်း၊ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လည်း ကောင်း၊ တပ်မတော်ကိုယ်စား လှယ်များနှင့် လည်းကောင်း၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ၊ လားဟူ ဒီမိုကရက် တစ်အစည်း အရုံးတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်လည်းကောင်း၊ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသော တိုင်း ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်ထောင်စုအဆင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိ်ုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲ စောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီမှ အရပ်သားကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လည်းကောင်း၊ ငြိမ်းချမ်း ရေးကော်မရှင်၊ ပြည်ထောင်စုငြိမ်း ချမ်းရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၊ MPC မှ တာဝန်ရှိသူ များနှင့် လည်းကောင်းစုပေါင်း၍ သီးခြားစီမှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကြကြောင်းသိရသည်။